Izimpawu Zokulondolozwa Kwezincwadi - Thumela RELAY
var brightcoveBrandsafety = '4 Ezemidlalo nezindaba ezikhethekile - zidluliselwe kwisikhangiso esiqondiswe' kuDiana, ePrincess of Wales nasePrince Charles babopha ifindo emshadweni wasebukhosini obumangalisayo ngo-1981. Abazali bePrince uWilliam noPrince…
Izinkanyezi: Izimpawu ezi-3 zodiac ezikwazi ukukubulala - IMPILO YEMPILO YEMPILO
Uma ukufundwa kwezinkanyezi kuthokozisa ukuhlukanisa izinhlamvu zethu, ezinye zezambulo zalo zisabanda emuva. Ngokusho kwabalandeli bale pseudo-science, abanye bethu bebefihla ukuthambekela kokubulala. Lezi ...
Izimpawu eziyi-11 ukuthi umdlavuza ungakhula emzimbeni wakho - ISANTE PLUS MAG
Okwesatshwa yiwo wonke umuntu, umdlavuza isifo esibulalayo. Ngo-2018, zalinganiselwa ukuthi zingama-382 izifo zomdlavuza ezatholakala eFrance, ngokusho kweNational Cancer Institute. Phakathi kwabo, cishe bangu-000 abantu abafayo. Lokhu kubukwa konke okunye…
Izimpawu ezi-6 zokuthi unobuntu obuqinile obukubeka uhlukane nabanye - UKUZIPHATHA KWEMPILO…
TELES RELAY	 UJan 21, 2020 0
“Amandla awaveli emzimbeni. Kuvela entandweni engenakufezeka ”kusho uMahatma Gandhi. Ngempela, ukuba namandla kuvame ukuhlotshaniswa nezimo zomzimba, kepha kufanele wazi ukuthi amandla abaluleke kakhulu ukuthi ...
Umhlangano wasebukhosini: UCamilla noPrincess Anne bakhombisa izimpawu zobumbano ezingafani - "asazi ...
var brightcoveBrandsafety = '4 Izemidlalo nezindaba ezi-XNUMX - ezidluliselwe ekuqondisweni kwesikhangiso' iCamilla, iDuchess yaseCornwall, eyaziwa ngokuthi iDuchess of Rothesay eScotland, yiChancellor yaseYunivesithi yase-Aberdeen.…
Izimpawu zokuqala ukuthi umdlavuza ukhula emzimbeni wakho - ISANTE PLUS MAG
Umdlavuza yisifo esibonakaliswa ukuphindaphindwa okuthe xaxa kwamaseli emzimbeni. Kungathinta izindawo ezahlukahlukene zomzimba futhi amathuba okusinda ahluka ngokuya ngendawo ethintekile nesigaba…
Umdlavuza ubulala izigidi zabantu njalo ngonyaka: Izimpawu eziyi-10 okufanele ziqaphele - I-HEALTH PLUS…
Ukwesatshwa yibo bonke, umdlavuza uhlala ungenye yezifo eziyingozi kakhulu umuntu angaba nazo. Ibonakala ngokuntenga futhi ingakhula buthule emzimbeni womuntu. Ngaphezu kwalokho, lesi sifo simele ...
Yiziphi izimpawu zomdlavuza we-anal? Izimpawu ezi-6 okufanele zazi - ISANTE PLUS MAG
Izifo eziyingozi kakhulu yilezo ezimpawu zaso zivame ukunganakwa. Umdlavuza we-anal ungenye ngokungangabazeki walezi zifo. Lesi sakamuva, i-asymptomatic esigabeni sokuqala sesi sifo, asipheli…
Izimpawu eziyi-10 zokuthi umuntu omthandayo oshonile useduze - ISANTE PLUS MAG
Impilo yakhiwa ngezigaba eziningana, izikhathi ezijabulisayo nezinenjabulo njengokuzalwa kwengane emndenini nezikhathi ezidabukisayo njengokugula noma ukulila. Lesi sigaba esibuthakathaka sokulila siyinkathi enzima ...
Impela! Ama-89% ayavuma ukuthi indlovukazi yayingadelelwa…
Boukary Sangaré: esikhungweni, "uMbuso kumele uhambe ngezindlela ...
EDakar, izinhloko eziyisithupha zamazwe ase-Afrika ziphonsela inselelo ukuvumelana kwe…
UPaul Mahel udelela ukuthula kweChiefs yendabuko
Kate Middleton uyachitha? Isabelomali sayo sezitolo sika-2019 sine…
Ungqongqoshe uhlela irekhodi lelo
IMali: uBamako uxoxisane no-Amadou Koufa - JeuneAfrique.com
I-India: URahul noPrayanka bakhohlisa abantu kwi-CAA futhi bavuse ...